Isivuno Archives | Umbele
UMnu uMakatshana Msomi waseMzinyathi, eThekwini, nesivuno
UMNDENI wakwaMsomi eMzinyathi, eThekwini, osungene shi kwezolimo ufisa ukwandisa amakhasimende. Lo mndeni ovele unebhizinisi lendawo yokulala nelokupheka ukudla okuvuthiwe emicimbini usuwengeze ngebhizinisi lokulima ngonyaka odlule nothi nalo liyawuvuma ngendlela emangalisayo.
UNksz uNcumisa Valashiya umnikazi weHlumisa Farm eRichmond, eKZN
UKUHLALA nezilwane nokulandela abafana uma besenga kutshale imbewu yothando lwemfuyo kuNksz uNcumisa Valashiya, umnikazi wepulazi iHlumisa Farm eliseRichmond, KwaZulu-Natali.
UNkk uHlekephi Sibisi umlimi waseHlokozi, eHighflats
WAQALA ukulima ezama ukulekelela umyeni wakhe ukondla umndeni owesifazane osephakela izitolo imifino.
UMnu uJantjie Ramokone umlimi olimela ukuziphilisa
Isithombe: Mukurukuru Media
Isimemezelo sikahulumeni sosizo oluzohlinzekwa abalimi abalimela ukuziphilisa siletha ithemba kodwa akuwona wonke umuntu ozohlomula. ULucas Ledwaba uyabika
UMLIMI uMnu uJantjie Ramokone uyakhumbula ukuthi ngenkathi esewumfana minyaka yonke ngo-Okthoba kwakuyisikhathi lapho esigodini sakubo babelungiselela ukulima uma sekudlule imvula.
UMnu uThokozani Sibeko umnikazi weThokozani Egg and Meat
Umfundi oqale edayisa amaqanda emgwaqweni usevule nesitolo esithi yena. Uxoxe noZIMBILI VILAKAZI
UKUMA emakhoneni emigwaqo anikeze abantu amapheshana ebhizinisi lakhe nokulikhangisa kahle ezinkundleni zokuxhumana yikona okumkhulise kakhulu ebhizinisini.
UNkk uFika Khumalo umnikazi weMayine Agri Tainment, eyenza imikhiqizo ka-beetroot
Ubuswa wuthando lwemvelo kanti selumholele ekukhiqizeni izinto eziphilisayo, okukhona ne‘wayini’ elithakwe ngo-beetroot kuzona. Uxoxe noLINDA XIMBA
WAQOMA ukushiya umsebenzi owawumholela kahle owayewunjiniyela kagesi kuMasipala waseThekwini osewusomabhizinisi ngenxa yokungesabi izinselelo.
UMnu uKgarose Molatela umsunguli we-yoghurt ethakwe ngobhatata
Usevulele abalimi abasafufusa ithuba oqhamuka nokwehlukile ngokukhiqiza i-yoghurt ethakwe ngobhatata. UZIMBILI VILAKAZI uyabika
UKUNGENA embonini yezokudla akusiwo neze umqondo omubi kodwa-ke kudinga ukuthi ube nesineke futhi uzimisele.
UNksz uSne Ngubane umnikazi weSne Chickens nomlimi osemncane
Ukuthola abaSamariya abalungileyo ezinkundleni zokuxhumana kumsizile wavuselela ibhizinisi lakhe umlimi osafufusa owacishe waphonsa ithawula evuka imfuyo yakhe ilele izigingqane. Uxoxe noZANELE MTHETHWA
WACISHE wadikibala waphelelwa wumdlandla webhizinisi umlimi osemncane osezakhele udumo ngokudayisa izinkukhu. UNksz uSne Ngubane usephenduke iqhawekazi nesibonelo entsheni yangakubo eKuthukuzeni, eManguzi.
Uhulumeni neNedbank bakhiphe uR40 million ukusiza ukuvuselela abadayisa izithelo
UMNYANGO wokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane, ngokubambisana neNedbank, usuzibophezele ekulekeleleni abadayisi bezithelo nemifino abawu-40 000 ngoR40 million ukuvuselela amabhizinisi abo.
UMnu uBarend Salomo, wesizwe sabaThwa, uwumlimi nesishabasheki setiye i-rooibos
Izithombe: iMukurukuru Media
Nakuba abaThwa bekhule betshala i-rooibos futhi benolwazi olunzulu ngaleli tiye elidume umhlaba wonke kodwa insila yobandlululo ibavalele ngaphandle. Nokho bakhona abalimi abasafufusa abazamayo ukukuguqula loku. UGUGULETHU KHUMALO uyabika ngokulwela igugu labo
EKHULA, eseyibhungu, eCederberg, eNtshonalanga Kapa, nedume njengekomkhulu letiye i-rooibos emhlabeni, ayikho enye into ayeyazi futhi eyithanda njengaleli tiye uMnu uBarend Salomo.
Lomisile kubalimi bogwayi abamnyama
Isithombe: iMukurukuru Media
Bakhala bayazithulisa abalimi bogwayi abamnyama njengoba ukuvalwa kwezwe kuwise inqwaba yamapulazi kanti amanye ayaxhuga. UGUGULETHU KHUMALO uyabika
ABALIMI abamnyama bagwayi abasafufusa baphoqeleke ukuthi bavale bangakwazi ukuqhubeka nomsebenzi ngesikhathi kuqala isizini entsha yokutshala ezinyangeni ezimbili ezedlule.
UNksz uMbali Nwoko, umlimi nesikhulu esiphezulu eGreen Terrace
Uneminyaka emine eqalile kwezolimo kodwa ugila izimanga. Uwola imiklomelo, ungafunga ukuthi selokhu kwathi nhlo, yiyona nto ayenzayo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngezindlela ezintsha zokulima ezisebenzisa ubuchwepheshe
WAYENGAKAZE aziphuphe ewumlimi futhi wayengazitsheli ukuthi yimboni umuntu ofana naye angangena kuyona ngoba wayecabanga ukuthi ngeyabantu abacebile futhi abakhule vele emakubo kunamapulazi.
UMnu uSinelizwi Fakade umlimi nomsunguli woKhanyo Farmer Development
Basebenzisa uthando lwezolimo nemfundo ukufukula abalimi abasafufusa nokulwa nokuntuleka kwemisebenzi entsheni. USLINDILE KHANYILE uyabika
SESIPHELILE isikhathi sokuthi abantu abamnyama beloku bengabalimi abancane abalimela ukuzidllela bona nokudayisa endaweni into engatheni kodwa kumele nabo babeyingxenye yabalimi abakhulu ababamba iqhaza elibonakalayo.
UMnu uNtuthuko Shezi weLivestock Wealth
Uhlanganise uthando lwemfuyo nobuchwepheshe ogila izimanga kwezolimo njengoba namhlanje elawula imfuyo nezivuno zenani likaR100 million. Ulandisa USLINDILE KHANYILE ngomsebenzi wakhe
UKUFISA ukutshala imali ngendlela ayiqonda kahle ukuthi isebenza kanjani yikona okwagqugquzela uMnu uNtuthuko Shezi, isikhulu esiphezulu seLivestock Wealth, ukuthi asungule le nkampani.
UDkt uMatome Moloto uwudokotela nomlimi
Ukungawutholi umsebenzi kukamfowabo emva kokufundela ukukhiqizwa nokunakekelwa kwezilwane kuholele ekutheni udokotela agcine esewumlimi, uxoxe noSLINDILE KHANYILE
UMA engelaphi iziguli lapho esebenzela khona uDkt uMatome Moloto, usuke esepulazini lakhe elikhulisa futhi lidayise izinkukhu, izimbuzi, izinkomo nezingulube. Izithelo zona bazitshalela ukuzidlela bona bewumndeni, abazidayisi.
UNkk uJoyce Gumede, usihlalo weBhangazi CPA
Ngemva kokubuyiselwa umhlaba eminyakeni ewu-21 edlule, umphakathi waseBhangazi, eSt Lucia, unethemba lokuthi usuzohlomula ngento ecacile kulo mhlaba. USLINDILE KHANYILE uyabika
NGONYAKA ozayo kulindeleke ukuthi kwakhiwe indawo yokuvakasha, iHeritage Lodge, enamagumbi awu-60 nokubhekwe ukuthi idle uR20 million engxenyeni yomhlaba owabuyiselwa umphakathi waseBhangazi, eSt Lucia.
UMnu uPeter Setou, isikhulu esiphezulu seVumelana, esiza imiphakathi ebuyiselwe umhlaba
Ukubuyiselwa umhlaba akusho ukuthi uzokwazi ukuwusebenza uma ungenalo ulwazi nemali. Yileli gebe iVumelana ezama ukulivala. Isikhulu esiphezulu sayo sixoxe noSLINDILE KHANYILE ngomsebenzi wayo
KUBALISWA mihla namalanga ngokuthi lubheda kangakanani uhlelo lokubuyiselwa komhlaba njengoba kukhona amanye amapulazi athi uma esebuyiselwe emiphakathini eyayiphucwe umhlaba agcine esephenduke umhume wabaphangi ngoba engasetshenziswa.
UNksz uThando Magane owumlimi nomfuyi uthi nakule ndima kuyaqhethwa ehhovisi
UKUBA wumlimi akusho ukuba wu‘mangcola’ futhi akusho ukusebenza ensimini kuphela. UNksz uThando Magane uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngale ndima
USESUNGULE isikole sokuqeqesha abalimi, iFresh Nest Farmers’Academy, ngoba efuna abalimi bagweme amaphutha awenza ngesikhathi esanda kuqala ukuba wumlimi.
Sikhulu isidingo somshwalense wezempilo eNingizimu Afrika. UMnu Nhlanhla Nene uchazele uSLINDILE KHANYILE ukuthi kungani
ISIPHAKAMISO somshwalense wezempilo iNational Health Insurance (iNHI) akuyona into okumele kubhekwe indaba yemali uma kukhulunywa ngayo kodwa kumele kubukwe ukuthi sizolekelela kuphi.
UMnu uNhlanhla Nene
OwayewuNgqongqoshe wezeZimali eNingizimu Afrika, uMnu uNhlanhla Nene, uthi buningi ubuthaka obuvezwe wukuqubuka kweCOVID-19 nokuzomele kulungiswe ukuze kufukulwe umnotho. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
ININGIZIMU Afrika kumele ibuyekeze indlela ephatha ngayo ezolimo ngoba yimboni emqoka engasiza ukuxazulula inqwaba yezinkinga ezikhungethe umnotho wakuleli owe bhu phansi ngenxa yeCOVID-19.
UMnu uLoyiso Manga ne-olive oil ayikhiqizayo
Ukhuthaza abalimi abamnyama ukuthi bacabange izinto ezihlukile nezintsha okhiqiza i-olive oil. Ulandise uSLINDILE KHANYILE ngendima aseyikhathulile
UZIMISELE ngokudayisa amabhodlela e-olive oil awu-5 000 ohambweni aluhlelayo lokuzungeza izwe lonke esuka eKapa umlimi osafufusa ogxile ekukhiqizeni amafutha omnqumo.